Nin Sheegtay Inuu Yahay Nebi Oo Maxkamadda Degmadda Hargeysa Ku Riday Xukuno Kala Duwan – Araweelo News Network (Archive)
Nin Sheegtay Inuu Yahay Nebi Oo Maxkamadda Degmadda Hargeysa Ku Riday Xukuno Kala Duwan
Hargeysa(ANN)Maxkamada degmada Hargeysa, ayaa go,aan kasoo saartay Nin sheegtay inuu yahay nebi, kaas oo dacwadiisu todobaadkii hore ka bilaantay maxkamadda gobolka hargesya. Garsooraha dacwadaa qaaday ayaa maanta ku dhawaaqay go,aanka xukunka Ninkaa oo ka kooban
saddex qodob. Kadib markii uu dhegeystay eedaha loo haystay Ninkaa oo sheegtay inuu yahay Nebi. Waxaana maxkamaddu ku xukuntay ninkaa oo sida garsooruhu go’aankiisa ku sheegay lagu helay inuu sheegtay nabinimo Shariif Cabdi Cawaalle (inatimiro), kaas oo ka yimi dhinaca Sooomaaliya.
Guddoomiyaha Maxkamada Degmadda C/rashiid Beer-geel, ayaa ku dhawaaqay inay maxkamddu ku xukumay eedaysane Shariif Cabdi Cawaalle (ina timiro) laba sanno oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo laba Malyan oo shilin oo lacag ah. Waxa kale oo uu Guddoomiyuhu sheegay in ninkan dalka laga mastaafurin doono marka uu dhamaysto xukunkaa.
Gudoomiyuhu wuxuu tilmaamay in ninkani uu dadka u sheegan jiray inuu ka dawaynayo Gabowga, hinaasaha, dhalmo la’aanta, hamad la’aanta iyo macaanka oo uu adeegsanayay ul yar oo uu sitay. Kaasi oo qofka marka uu saaro uu qofku miyir doorsoomi jiray, isla markaana uu sheegan jiray inuu yahay Nebi Khadar (CS).
Dacwad oogaha ka socday xafiiska xeer Ilaalinta gobolka Yuusuf Caato ayaa u sheegay shebekada wararka ee Araweelonews in Ninkaa oo magaciisu yahay Shariif Axmed Cabdi (Ina Timira Cawaale ) uu yahay Nin sheegtay Nebi isagoo ku doodaya inuu yahay Nebi Khadar(CS), isla markaana maxkamaddu dhegeystay dacwada kiiska ninkaa saaka oo lagu eedeeyay qodobka 342 XCG, oo ay ka furantay dacwadu maxkamadda Degmadda. “Maaha inuu sheegtay oo Keliya Nebi Khadar ee waxa kaloo uu sheegtay inuu yahay Nebi Maxamed (CSW).” Ayuu yidhi dacwad oogaha Yuusuf Caato.
Dhinaca kale go,aanka dawcada loo haystay Ninkaa ayaa xukunka garsooruhu kasoo saaray yahay mid fudud marka loo eego waxyaabaha lagu eedaynayay, taas oo la rumaysan yahay inay sabab u tahay awooda maxkamadda degmada oo aan soo saari Karin xukun ka baddan laba sannadood.
Published April 16, 2011 By info
Hargeysa: Ku Dhowaad Todobaatan Guryo Buulal Ah Oo Ku Shufbeelay Afaafka Hore Ee Xaafada Caanka Ah Ee Goljano
Shaqaalaha Wasaaradda Duulista Oo Maanta U Fadhiistay Imtixaan Iyo Wasiirka Oo Sheegay Inaanu Xal U Hayn Kuwa Imtixaanka Dhaca